မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဂျပန်မှာ (၅) နှစ်နေထိုင်ခွင့်ရမယ့် ဒုက္ခသည်ဗီဇာ လျှောက်ထားနည်းအပြည့်အစုံ – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဂျပန်မှာ (၅) နှစ်နေထိုင်ခွင့်ရမယ့် ဒုက္ခသည်ဗီဇာ လျှောက်ထားနည်းအပြည့်အစုံ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဂျပန်မှာ (၅) နှစ်နေထိုင်ခွင့်ရမယ့် ဒုက္ခသည်ဗီဇာ လျှောက်ထားနည်းအပြည့်အစုံ
သင်ကကော ဘာနေ့နံလဲ ဖတ်ကြည့်နော်…နေ့(၇) နေ့ နဲ့ သူတို့အကြောင်း
တစ်ကျော့ပြန်ခေတ်စားလာနေတဲ့ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ ‘ဒုက္ခသည်ဗီဇာ’အကြောင်း (နိဒါန်း) ဒီပိုစ့်ကိုတော့ ဂျပန်ကိုလူပို့နေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေ ကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကြိုက်ချင်း မကြိုက်ချင်းထက် လက်ရှိဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြင့် ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
အခုအချိန်မှာတော့ ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ်လျှောက်ထားကြသူများကို မကြုံဘူးလောက်အောင် စံချိန်တင်မြင့်မားမှုနှုန်းနဲ့ ဖော​ဖောသီသီကြီးကို ထုတ်ပေး,အသိအမှတ်ပြုပေးနေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုထုတ်ပေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုပေးနေသလဲ..?ဆိုတာကိုတော့ နားလည်မယ်လို့ယူဆလို့ အကျယ်မရေးတော့ပါဘူး။ ရေးချင်တာက ဒီဗီဇာကိုရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ..?ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ ကဲ- စလိုက်စို့ရယ်..
(စာကိုယ်) ဂျပန်အစိုးရပေးနေတဲ့ ‘ဒုက္ခသည်ဗီဇာ’ရအောင် ဘယ်လိုလျှောက်ယူကြမလဲ..? ဒီအကြောင်းမရေးခင်- (က) ‘ဒုက္ခသည်ဗီဇာ(Refugee Visa)ဆိုတာဘာလဲ..? (ခ)’ဘယ်လိုလူမျိုး(နိုင်ငံသား)တွေလျှောက်ခွင့်ရှိသလဲ..?ဆိုတဲ့ အခြေခံကျတဲ့အချက်ကို အရင်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
‘ဒုက္ခသည်ဗီဇာ’ဆိုတာဟာ ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ အတိဒုက္ခရောက်နေလို့ မိမိဘဝဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခြင်းလို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်ယူလို့ရပါတယ်.။အဆိုပါနိုင်ငံကလူတိုင်း လျှောက်လို့ရပါတယ်။
​ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ ၁၉၇၈ ခုနှစ်က ဗီယက်နမ်လှေစီးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရာကနေစတင်ခဲ့ပြီး၊ တရားဝင်အနေနဲ့ကတော့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ဒုက္ခသည်ကူညီခြင်းဆိုင်ရာ ‘ဂျနီဗာစာချုပ်’မှာ လက်မှတ်ထိုးရာကနေစတင်ခဲ့တာပါ။
ပထမဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့ အီရန်နဲ့ တူရကီ(ကာဒ့်လူမျိုး)တို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားကိုတော့ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ စတင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်..(စကားချပ်)
ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသလဲ..? ဒီအချက်(၃)ချက်နဲ့ကိုက်ညီရင် အသိအမှတ်ပြုခံရပါတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ ဒုက္ခသည်လျှောက်လွှာရဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ “အကယ်၍သင်၏မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်ရောက်သွားပါက သင့်အားမည်သည့်အချက်များကြောင့် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံရမည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသနည်း?”ဆိုတဲ့မေးခွန်းအောက်မှာ အချက်(၆)ခုကို လေးထောင့်ကွက်များနှင့်ဖော်ပြထားပြီး၊ အဲ့အထဲကမှ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကွက်မှာ အမှန်ခြစ်ပေးရပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့အချက်(၆)ချက်တွေကတော့ လူမျိုးအနွယ်၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံရေးအယူအဆ၊ အခြား။ အထူးသတိပြုရမှာက ခုနကပြောခဲ့သလို အကွက်အားလုံးကို အမှန်ခြစ်ရမှာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အကွက်ကိုပဲ အမှန်ခြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ဒုက္ခသည်အဖြစ်လျှောက်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ(မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့ statement )ပါ.. အဆိုပါ statement ထဲမှာ မိမိမွေးဖွားရာအရပ်ဒေသကနေ ဖြတ်သန်းကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့စဉ်အခါတုန်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးကိစ္စများ၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါက အဆိုပါပါတီအဖွဲ့အစည်းအတွင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကိစ္စများကို ထည့်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ လ ဝက အရာရှိက လူတွေ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါ ထွက်ဆို(ဖြေဆို)ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။ အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း သင်ရေးပြီးတင်ခဲ့သောဒုက္ခသည်လျှောက်လွှာနဲ့ statementထဲကအကြောင်းတွေကိုပဲ ကိုက်ညီမှုရှိ-မရှိ(မှန်-မမှန်)ဆိုတာကိုပဲမေးတာပါ။
အဆိုပါအချက်(၃)ချက်ကို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဖြေဆို(ထွက်ဆို)နိုင်သူမှန်သမျှကို ဂျပန်အစိုးရတရားရေးဌာနက ဒုက္ခသည်ဗီဇာ(Refugee Visa) ဂျပန်ရှိမြန်မာတွေခေါ်နေတဲ့’ဗန်းစကား’နဲ့ပြောရရင် ‘အာအကြီးဗီဇာ’ပေးပါတယ်။
ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရရင် ဘာတွေကောင်းသလဲ..?၊ ဘယ်လိုဗီဇာအမျိုးအစားရရှိမှာလဲ..? ပထမဦးဆုံးကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ လ ဝက ရုံးကိုခဏခဏမသွားရတော့တဲ့အတွက် စိတ်ဆင်းရဲစရာ၊ စိတ်ညစ်ရတဲ့ဒဏ်ကနေ ကင်းလွတ်သွားပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ သင့်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း တရားရေးဝန်ကြီးလက်မှတ်နဲ့အတူ ဂျပန်မှာရေရှည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ(long term visa- ဂျပန်လို’တေးဂျူး-定住ဗီဇာ) ၅ နှစ်တိတိကို လ ဝ က ရုံးက ချက်ချင်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအဆင့်ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ်ဗီဇာသက်တမ်းသွားတိုးရင် ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားတွေကို အမြင့်ဆုံးဗီဇာဖြစ်တဲ့ ရေရှည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်(Permanent resident ဂျပန်လို အေးဂျူး-永住)ဗီဇာ လျှောက်လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်လျှောက်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းအတူတူ “သူ့ကျတော့ အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး”၊ “ကျနော်/ကျမတို့ကျတော့ ဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်ခံရတာလဲ..?” အများဆုံးအမေးခံရတဲ့မေးခွန်း။
ဒီမေးခွန်းမေးသူတိုင်းကို အမေးနဲ့ပဲမောင်ရှင်ပြန်ဖြေ(ပြန်မေး)တာက (က)- ကိုယ်ရေးတင်လိုက်တဲ့ ဒုက္ခသည်လျှောက်လွှာရယ်၊ statement ရယ်နဲ့ အဲ့အချက်တွေအတိုင်း လ ဝ က အရာရှိမေးတဲ့(အင်တာဗျူး)အခါမှာ ကိုက်ညီမှုရှိ-မရှိ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်ပြန်စစ်ကြည့်ဖို့နဲ့ (ခ)- ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်းသိရဲ့လား..?ဆိုတာပါပဲ။
ဖြစ်စဉ်တွေများစွာထဲက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှိတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြရရင်- ‘မောင်ဖြူ’ဆိုတဲ့သူဟာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာမွေးသူဆိုပါစို့.. ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်တော့ သူ့အသက်က ၃ နှစ်ပဲရှိဦးမယ်။
သို့ပေမင့် သူ့ရဲ့statementထဲမှာတော့ ရှစ်လေးတုန်းကာလတုန်းက ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ရေးထားတယ်။
မောင်ဖြူကိုအင်တာဗျူးမယ့် တာဝန်ကျ လ ဝ က အရာရှိက သူ့ကိုတွေ့တွေ့ချင်း မတ်တတ်ရပ်ပြီး အလေးပြုကာ ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်.. “ကမ္ဘာ့အသက်ငယ်ဆုံးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကို မြင်တွေ့ရလို့ပါ..”တဲ့
နောက်တစ်ဦးကျတော့ “မင်းကိုနိုင်မိန်းမနဲ့ကျမနဲ့က နိုင်ငံရေးအတူတူလုပ်ခဲ့ကြသူတွေ”တဲ့.. ၈၈ ကာလတုန်းက ခေါင်းသားခေါင်းဆောင်’မင်းကိုနိုင်’က အိမ်ထောင်မှမရှိသေးတာ.. အဲ့လို အပေါက်တွေ သောက်တစ်လွဲတွေဖြေခဲ့ကြသူများ ဂျပန်မှာအခုထိရှိတုန်း။
လ ဝ က,ကဖမ်းတဲ့အခါမှာတော့ “ကျနော်/ကျမတို့လွတ်အောင်ကူညီပေးပါဦး”ဆိုပြီး ကူညီပေးခဲ့ရတဲ့လူပေါင်းလည်း မနည်းမနောကိုရှိခဲ့တာ.. တစ်ချို့ကျတော့ ‘မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရမှာဆိုးလို့ ဂျပန်အစိုးရထံမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်လည်းတောင်းခံထားသေးတယ်။
မိမိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်(passport)သက်တမ်းကုန်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီး သံရုံးသွားပြီး သက်တမ်းတိုးသေးတယ်။ အခုခေတ်ဗန်းစကားနဲ့ပြောရရင် အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြသေး..
အဲ့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင် “ခင်ဗျားတို့ ဗီဇာမရတော့ မရဘူး..ဆိုပြီး ဂျပန် လ ဝ က ကိုအပြစ်တင်တယ်။ ကိုယ်စီးနေတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်းသိအောင်လည်း အောက်ဆင်းပြီးလက်နဲ့စမ်းကြည့်ကြဦး..”လို့ တုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောပြီး သတိပေးရတဲ့အဖြစ်..
(နိဂုံး) ဂျပန်အစိုးရကတော့ လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ ‘ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ရော၊ အထူးနေထိုင်ခွင့်အနေနဲ့ပါ သမိုင်းတစ်လျှောက် တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းလောက်အောင်ကို ဆွမ်းကြီးလောင်းသလိုမျိုး ဖောဖောသီသီကြီးကို ပေးနေတာပါ..
“ယူမယ်.. မယူဘူးကတော့ မင်းရဲ့သဘောပါ.. သေချာတဲ့ အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပြီ..”ဖြစ်လို့ အကယ်၍ယူမယ်ဆိုရင် တစ်ချက်တည်းနဲ့ကျင်းဝင်သလိုမျိုးဖြစ်အောင် အပေါ်မှာရှင်းပြ,ရေးပြထားတဲ့အတိုင်း သေသေချာချာပြင်ဆင်ပြီး လျှောက်ယူကြပါလို့ အသိပေးလိုပါတယ်.. ရရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စများကို နိုင်သည့်ဖက်က လုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့လည်း ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါကြောင်း.. အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ.. (မောင်ရှင်
Previous Article ဂေါ်ဖီထုပ်ကြီး တစ်ထုပ် (၈၀) ကျပ်မှ (၁၀၀) ကျပ်သာ ဈေးရသောကြောင့် စိုက်ပျိုးတောင်သူများ အရှုံးပေါ်ပြန်ပြီ
Next Article အမေစုချစ်တဲ့ သားသမီးတွေ အဘကျောင်းလာထားရတာပဲမဟုတ်လား ဟု လာအပ်သည့် ကလေးများကို ပုန်းထွန် အထက ဆရာမများခနဲ့